Iingoma ezili-15 ezinentsingiselo malunga neZulu: Ukudakumba ngoMculo - Imizekelo Ye Tributes Given At Funerals
Iingoma ezili-15 ezinentsingiselo malunga neZulu: Ukudakumba ngoMculo
Abantu abaninzi babhenela kumculo ukuze bafumane intuthuzelo kunye nenkuthazo njengoko bezililela ukuswelekelwa ngumntu abamthandayo. Kwabo bakholelwa kubomi basemva kokufa, iingoma ngezulu ziqinisekisa ukuqonda ukuba ababi buhlungu njengomntu ongenathemba. Nazi iingoma ezilishumi elinesihlanu malunga nezulu ezidibanisa amagama okholo kunye neemvakalelo zokulila nokukhumbula.
Iingoma ezithetha ngeZulu
Iingoma ezithetha ngobunyani bezulu zibonisa ukulindeleka kokuhlangana kwakhona nabantu obathandayo. Ezi ziingoma eziza kuvusa iimvakalelo kwaye zivelise ithemba.
Ukufundwa kweMingcwabo yamaKatolika
Ama-50 amaNqaku okuBhiyozela uMama wokuSweleka
AmaNqaku aKhumbuza isiQinisekiso sokuFa kunye neMiyalezo yokukhumbula
Ndingacinga nje ngoBart Millard, Ndenzele inceba
Zimbalwa iingoma ezimalunga nezulu ezibe nefuthe lale ngoma eyapapashwa ngo-2001. UBart Millard, imvumi yeqela lamaKrestu iMercy Me nomqambi wale ngoma, wakhathazwa ngokwasemzimbeni nangokweemvakalelo ekhula ezandleni zikayise. Emva kwexesha, xa utata egula ngokungaginyisi mathe ngumhlaza, uBart walungisa ubudlelwane kunye notata wakhe wabhala le ngoma njengoko wayecinga ngamava awayeza konwaba ngoyise ezulwini. Ibali elichukumisayo lenziwa imovie ngo-2018.
Cinga '' Ikhaya leBout nguDebra Talley
Kwabanye abantu, amazwi ahambisanayo kunye neentliziyo ezivakalayo zomculo wevangeli wasemazantsi unokuchaphazela umphefumlo njengazo zonke iingoma zomculo. Igama lika Talley lalifana noluhlobo ukususela ngo-1984. URoger noDebra Talley kunye nabantwana babo baye badlala kwaye baphumelela phantse kuwo onke amabhaso anikwa ngumzi mveliso womculo wamaKrestu. Le ngoma, ebhalwe nguDebra, ifumene amawonga kwimibutho emininzi kunye namanqaku abantu.
Izulu nguMichael English
UMichael IsiNgesi ubengomnye wemveliso yeemvumi ezingamaKristu ezihlala ixesha elide njengomculi wedwa kunye nelungu lamaqela. Kwikonsathi, isiNgesi sike saxelela abaphulaphuli ukuba wathembisa umama wakhe ukuba ngalo lonke ixesha ecula ikonsathi, uya kucula ingoma nokuba ibe nye ngezulu. Le yayiyingoma ebonakalayo kwi-albhamu yakhe yokuqala. 'Ubomi ngaphandle kokulila… ngenye imini buya kuba bobam' Yile nto izakubayiyo izulu.
Ndigcinele indawo nguMateyu West
UMateyu West ubhale uninzi lweengoma ezithetha ngeemeko zobomi kwaye zivuselela iimvakalelo zokwenene zentuthuzelo, uxolo kunye nenkuthazo. Le yingoma ethetha ngeemvakalelo kunye neemvakalelo ezikhoyo xa umntu amthandayo esweleka ngokunzulu. Le ngoma ikhuthaza ubunyani bethemba ebomini bakho.
Ndiza kuphinda ndikubone ngeWestlife
Imvumi ephambili kwiqela laseIreland iWestlife lixoxe ngokubaluleka kokholo lwayo lobuKristu amatyeli aliqela. Le ngoma ithetha ngethemba lokuba uya kuphinda ababone abathandekayo bakhe, kunye nemvakalelo yobukho babo obuqhubekayo ebomini bakhe.
Ukuba izulu nguAndy Griggs
Ezinye iimvumi zinako ukufaka ibali kwi-ballad njengoko zicula. UGriggs uyakwazi ukubamba imimangaliso kunye nokubukeka kwezulu. Amagama akhe kunye nomnqweno wakhe wokuthetha uya kukunceda ukuba ucinge ngobomi obususa kwintlungu kunye nelahleko.
Xa ndifika apho ndiya khona nguGeorge Teren kunye noMlambo uRutherford, orekhodwe nguBrad Paisley
Amagama ale ngoma ayakhuthaza kwaye ayakha. Ibonakalise ukukhokelela kukaPaisley ngamazwi agciniweyo nguDolly Parton. Amandla engoma aqhubela uParton kuye kwi-25thingoma eyodwa, noPaisley uye kweyesihlanu. Kodwa ividiyo ehamba nengoma iyibeka ngaphaya kokumangalisa. Le vidiyo inabantu abaninzi abaphakamise imifanekiso yabantu ababathandayo abaswelekileyo. Ababini abadumileyo kule vidiyo babandakanya uTeresa Earnhardt, kunye nomfanekiso wendoda uDale, kunye noMichael Reagan kunye nefoto katata wakhe, owayesakuba ngumongameli. Ividiyo iphantse yoyike ukuba ungalili. Musa ukuthatha ubuganga.
Kuya kubakho uMhla kaJeremy Camp
UJeremy Camp ngumculi wangoku onqamleza isandi esiluqilima. Le ngoma lulongezo olunamandla ekukhetheni iingoma ezikhumbuza ngento eza kwenzeka njengoko sisuka kwindlela yokuphila yasemhlabeni siye kulonwabo lwasezulwini.
Yiya Phumla phezulu kuloo Ntaba nguVince Gill
Enye yeengoma zomculo welizwe, uVince Gill waqala ukubhala le ngoma ngo-1989 emva kokubhubha kwemvumi yelinye ilizwe uKeith Whitley. Akayigqibanga le ngoma de kwaba yiminyaka embalwa kamva xa umntakwabo uBob wasweleka ngo-1993 ngenxa yesifo sentliziyo. Nangona abanye amagcisa berekhode le ngoma, akukho mntu ubonakala ethimba imvakalelo emsulwa kwingoma njengoVince.
isagittarius uphawu lomlilo
Iingoma Ngotata waseZulwini
Kukho iintlobo ezahlukeneyo zeiingoma oza kuzisebenzisa emingcwabeniukuhlonipha nokukhumbula abantu abohlukeneyo kwiimeko ezahlukeneyo. Ukukhumbula ifuthe ubawo ebomini bakho yimvakalelo enamandla. Nazi iingoma ezihambayo malunga nootata.
Danisa noBawo nguLuther Vandross
UVandross, owasweleka utata xa wayeneminyaka esixhenxe, uthimba ukudideka nothando kunye neentlungu ngendlela eshukumayo, kodwa entle. Ingoma iyamangalisa ngokujonga into ayikhumbulayo ibonwa ngamehlo aneminyaka esixhenxe ubudala.
Ndoyikise ngezulu nguVince Gill
UGill ubhale le ngoma kunye nenkosikazi yakhe, imvumi / umbhali wengoma uAmy Grant, kunye nabanye ababini. Ingoma yaphefumlelwa ngumkhwe ka-Amy, owamkela iindaba ezivela kugqirha apho wahlekisa wathi, 'Baza kwenza ntoni? Undoyikisa ngelizulu? ' Igalelo lijonga ukujongana nokuphela kobomi basemhlabeni ngokuqonda ukuba obo bomi buza kuqala.
Iinyembezi ezulwini nguEric Clapton
Ngo-1991 emva kokusweleka konyana wakhe, uClapton kunye nomlobi wengoma uWill Jennings basebenze kunye ukubhala le ngoma. Unyana wakhe uConor wawa ngamabali angama-50 kwisakhiwo sokuhlala kwisiXeko saseNew York.
Iingoma Ngokukhumbula Umama Wakho Ezulwini
Ukulila kwahlukile kuye wonke umntu, kodwa umculo unokuba namandla wokuthatha umzabalazo ngokulahlekelwa ngumama. Nantsi imizekelo embalwa yemiyalezo enamandla.
KwiiArms zeNgelosi nguSarah McLachlan
USara McLachlan ngumculi ophumelele amabhaso ngeli xesha. Ingoma yakhe inomxholo othile ngenxa yokusetyenziswa kwayo kumdlalo bhanyabhanya othile kunye nendlela abhale ngayo. Kodwa ingoma ikwathetha ngamalungelo ezilwanyana kunye nezilwanyana ezixhatshazwayo, ukulala, kunye nokuzibulala. Ukungaqondakali kwingoma kukuvumela ukuba uyixhume phantse kuyo nayiphi na imeko kwaye ufumane intsingiselo. Izwi lakhe kunye nomculo wakhe uyamtshutshisa.
Izitalato zaseZulwini nguSherrie Austin
Ingoma ibhalwe ngokudibeneyo ngumculi welizwe lase-Australia uSherrie Austin. Ibalisa okwakutshanje kuthotho lwemigumbi yesibini yasesibhedlele yokuthandazela umntwana wakhe ogulayo noswelekileyo oneminyaka esixhenxe ubudala. Luhlobo lokudakumba kweengoma ezenze umculo welizwe ixesha leminyaka.
Zonke iinyembezi zam nguJulie Miller
Le ngoma ihlanganiswe ngabaculi abaninzi. Ingoma ithetha ngotshintsho olumangalisayo olwenzekayo xa umntu edlula kobu bomi aye kolandelayo. Ilula, ikhombe kwaye izithembile, umculo, nokuba uyicula ngubani, uya kuvelisa ithemba entliziyweni yakho.
Umculo oVakalisa Intliziyo
Umculo unceda abo basentlungwini ukuba babhiyozele ubomi bomntu abamthandayo kunye nethemba lendawo engcono kunye nokudibana ekugqibeleni. Nangona inentsingiselo kwinkonzo yomngcwabo, iingoma ezimalunga nezulu zinokuthuthuzela abantu abasentlungwini nangaliphi na ixesha.
Uncwadi Ne Poetry Ukuqonda Kwaye Ukuzalwanolawulo Ukusilela Kwevitamin D Zilolonge E Empilo Imeko Izinja Nokuhamba
amagama amabhinqa aqala ngo-j
Bungakanani utywala obuku-whitney epink
indlela yokudlala ngothando ngesicatshulwa sakho
Yintoni enokudityaniswa nebranti?
indlela yokufumana amabala amthubi kwiingubo ezimhlophe